Misoro yeNhau, Chipiri, Chivabvu, 31, 2022
Madzimai erudzi rwechiChangani kuChambuta mudunhu reChiredzi ari kuchema-chema kuti vanofamba nzendo refu dzinosvika makiromita makumi matanhatu kuenda kuchipatara kunosungunuka.
Mutongi wedare repamusoro VaJoseph Mafusire vati meya weHararare VaJacob Mafume vakambomiswa basa kanokwana kana negurukota rezvematunhu VaJuly Moyo vadzokere pabasa.
Nyanzvi mune zvehupfumi pamwe nevemabhizimusi votarisa kana mutemo wakadzikwa nehurumende masvondo maviri wekubvumidzwa kwevanhu vane mari dzekunze kupinza zvinhu zvekushandisa zuva nezuva pamwe nezvekudya munyika senzira yekudzikamisa mitengo yezvinhu wave kuratidza michero.
Vamiriri vevashandi vanoti hofisi inoona nezvemafambisirwo ehurumende kana dare reparamende vaongorore huori hunonzi huri kuitika kuNational Social Security Authority.
Muchirongwa chedu cheThe Connection chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nevechidiki kubva kumapato akasiyana siyana nenyaya yemhirizhonga zvichitevera kurohwa kunonzi kwakaitwa vamwe vechidiki vebato reCCC nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZanu-PF.